The Banker (2020) – Gold Channel Movies
ဖြစ်ရပ်မှန် အား အခြေခံထားသော ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ Marvel Universe ထဲကမင်းသားသုံးယောက်ကို တစ်ပြိုက်နက်တည်းတွေ့ရမယ့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ အရမ်းခန်းနားအောင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Apple + ဇာတ်လမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Anthony Mackie–( Captain America: The Winter Soldier (2014)Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019, the Winter Soldier)မှာသရုပ်ဆောင်ထားသူ။ Nicholas Hoult–( X-Men: First Class ,Jack the Giant Slayer, Warm Bodies, Mad Max: Fury Road)သရုပ်ဆောင်ထားသူ Nia Long—(The Fresh Prince of Bel-Air, Third Watch and Empire, Boyz n the Hood, Friday, Love Jones, Soul Food, In Too Deep,The Best Man, Big Momma’s House ,Are We There Yet)သရုပ်ဆောင်ထားသူ Samuel L. Jackson—Die Hard withaVengeance (1995), A Time to Kill (1996), The Long Kiss Goodnight (1996), The Negotiator (1998), Deep Blue Sea (1999), Unbreakable (2000), Shaft (2000) and its sequel, XXX (2002), Snakes onaPlane (2006), Kong: Skull Island (2017) and the Star Wars prequel trilogy (1999–2005)နဲ့ Marvel AGENT OF SHELD , နစ်ဗျူရီကြီးပေါ့ …… ဒီဇာတ်လမ်းကို အသေစိတ်ပြောပြခဲ့တဲ့သူကတော့ ဂါးရက် ဂျူနီယာ ရဲ့ ညီမ စင်သီယာ ဂါးရက် ဟာ ပြန်လည် ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်တွင်လူဖြူလူမဲ ခွဲခြားမှုကြီးရှိနေတဲ့ အချိန် ကာလ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတွေစတင်ပြီးတော့ တိုးတတ်စပြုတဲ့အချိန်ကာလ ခေတ်တစ်ခုမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကြောင်းလေးကို အခြေခံလိုက်ပါတယ်။ ဘတ်နာ့ဆိုသူဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက လူမဲနိမ့်ကျမှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ရပြီး သူဟာ စီးပွားရေးအမြင်မှာပါရမီရှိတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ တတ်ဆက်မှာ လူမဲခွဲခြားရေးအရမ်း ပြင်းထန်တာကြောင့် အယ်အေကိုတတ်ပြီး အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးအမြင် စီးပွားရေးလှည့်ကွက် ငွေကြေးတွက်ချက်မှုကို လေးစားဖွယ်ဖြစ်အောင်ပြသထားပြီး သူ့ရဲ့ အနိမ့်ပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာ သူကဟာ ဂျိုး ဆိုသူနဲ့ တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ပြီးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုစတင်ရန်ကြံစည်ပါတော့တယ်။ တကယ်လုပ်ဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းဟာ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ စွာလုပ်ဆောင်နေတဲ့ တိုက်တာကြီးအား ဝယ်ယူကာ ငွေကြေးဖြန့်ကျက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာ လူမဲဖြစ်နေတာနဲ့ အညီ လူဖြူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မက် စတိုင်နာ နဲ့ ပူးပေါင်းကာ သုံးယောက်ပေါင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ငန်းစတင်ပြီးတာနဲ့ အညီ ဘတ်နာ ဟာ သူ့ရဲ့နယ်မြို့လေးမှာ ဘဏ်ဝယ်ဖို့ပါ ထပ်မံပြီး လုပ်ဆောင်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ တတ်ဆက်ရဲ့ လူမဲ ခွဲခြားမှုဟာအရမ်းပြင်းထန်နေပြီ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေတွေ့မလဲ….. ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ …. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အခေါ်အဝေါ် တွက်ချက်မှု လုပ်ဆောင်မှု လှည့်ကွက်အားလုံးကို ဒီဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ကြည့်ရုံနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု တည်ထောင်ချင်စိတ်ပေါက်လောက်အောင် တင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်း ……….
Size – 880MB / 270MB
Download Yandex SD ျမန္မာ 270MB7days gcmovies
Download Yandex HD ျမန္မာ 880MB7days gcmovies
Download Megaup SD ျမန္မာ 270MB7days gcmovies
Download Megaup HD ျမန္မာ 880MB7days gcmovies
Download Mega SD ျမန္မာ 270MB7days gcmovies
Download Mega HD ျမန္မာ 880MB7days gcmovies
Download GDrive SD ျမန္မာ 270MB7days gcmovies
Download GDrive HD ျမန္မာ 880MB7days gcmovies